ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်ဆိုသော အလွန်အကျိုးပေးသည့် ဘုရားရှိခိုး – Barnyar Barnyar
ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်ဆိုသော အလွန်အကျိုးပေးသည့် ဘုရားရှိခိုး
လာဒ္တိတ္ေနသူမ်ား ၊ ေဈးေရာင္းမေကာင္းသူမ်ား ၊ အေႂကြးမရသူမ်ား ၊ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သူမ်ား ၊ ေငြေၾကး အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား ၊အႀကီးအကဲနဲ႔ အဆင္မေျပသူမ်ား ၊ အလုပ္အကိုင္ တို႔လို တန္းလန္း ျဖစ္ေနသူမ်ား ၊ လာဒ္႐ႊင္ေငြဝင္လိုသူမ်ား အတြက္အလြန္တရာမွ လာဒ္႐ႊင္ေစေသာ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ႐ြတ္ေသာ ဂါထာကိုလက္ေဆာင္ေပးလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…
ကိုယ္ေတြ႕တစ္ခု ေျပာပါရေစ… 2012.12.31 ေန႔မွာ ေငြ ၆ သိန္း ေပးပါမယ္ လို႔ ကတိျပဳခဲ့တာပါ.. 29.12.2012 ေန႔မွာ လက္ထဲမွာ ေငြ ၄ သိန္းပဲ ရွိပါတယ္.. ၂ သိန္း လိုေနတယ္ေလ.. ၂ သိန္းကို ၂ ရက္ အတြင္းဘယ္လို ရွာရမလဲ.. စိတ္ေပါက္ေပါက္ နဲ႔ တီဗြီ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္တာ အဲဒီမွာ ဗန္ေမာ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ကုမာရ ဘိဝံသ က MRTV4မွာ ရေသ့ႀကီးဦးခႏၲီအေၾကာင္း တရားေဟာေနတာ နာ လိုက္ရၿပီး အဲဒီလာဒ္႐ြင္ေစတဲ့ ဂါထားကို အားတိုင္း ႐ြတ္ မနက္ ၄၅ မိနစ္ ၊ ည ၄၅ မိနစ္ ႐ြတ္လိုက္တာ 31.12.2012 ေန႔လည္ 2း00 နာရီမွာ–
ေဟာခန္းမွာ ေဗဒင္ေဟာေနရင္ ဖုန္းဝင္လာတယ္..ကံစမ္းမဲေပါက္တယ္တဲ့ ၂ သိန္းရမွာတဲ့……ဟိုက္ရွားပါး…. လန္းသြားပါတယ္…..
ကတိ အတိုင္း ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္….ကိုယ္ေတြ႕ပါဗ်ာ..
အဲဒါနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေဗဒင္ဆရာတစ္ေယာက္ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာျပတာ သူက ျပန္ေျပာတယ္.. ငါလည္း အဲဒါ ႐ြတ္တာ ဒီမနက္ပဲ အိမ္ဝိုင္းေရာင္းထြက္ လို႔ ဆိုၿပီး ၂ သိန္း လာကန္ေတာ့သြားတယ္တဲ့…. ..ေတာ္ေတာ္ထူးတဲ့ ဂါထားပါပဲဗ်ာ
ေငြေၾကးအခက္ခဲ ရွိတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား လည္း မနက္ ၄၅ မိနစ္ ည ၄၅ မိနစ္ ႐ြတ္ၾကည့္ပါလာဗ်ာ….ဘာ ခက္တာ မွတ္လို႔ …
ေဒါက္တာ ကုမာရ ဘိဝံသ(ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္) ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေသာ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ဂါထာေတာ္။
အရဟံ၊ ဗဟိ-အႏၲ-ဇယံ၊ သုဂတံ၊
အမိတံ၊ ဝိရဇံ၊ လလိတံ၊ အတုလံ၊
စရဏံ၊ တိ-ဘဝူပ-သမံ၊ ယမကံ၊
သုခံ ဒံ ၊ သရဏံ ၊ ပဏာ မာမိ ဇိနံ။
(အနက္ကို ႐ြတ္ဆိုရန္မလိုပါ..အဓိပၸါယ္ သိရန္ ေရးေပးတာပါ…
အထက္ပါ ဂါထာကို သာ႐ြတ္ပါ။)
၁။ အရဟံ – ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၂။ ဗဟိ-အႏၲ-ဇယ – အတြင္း-အပ ရန္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၃။ သုဂတံ – ေကာင္းေသာစကားကို ေဟာေျပာတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၄။ အမိတံ – မႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္ တန္ခိုးဗ်ာဋိဟာရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၅။ ဝိရဇံ – ကိေလသာျမဴ ကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၆။ လလိတံ – တင့္တယ္ သပၸါယ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၇။ အတုလံ – အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၈။ စရဏံ – အက်င့္စရဏႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၉။ တိ-ဘဝူပ-သမံ – ဘုံသုံးပါး၌ ကိေလသာၿငိမ္းေအးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၁၀။ ယမကံ – ေရမီးအစုံအစုံ တန္ခိုးဗ်ာဋိဟာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၁၁။ သုခဒံ – ခ်မ္းသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၁၂။ သရဏံ – ကိုးကြယ္အားထားရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
၁၃။ ဇိနံ – မာန္ငါးပါးကိုေအာင္ျမင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရွိခိုးပါ၏။
လိုသေလာက္ မရေပမဲ့ လုပ္သေလာက္ေတာ့ ရပါတယ္…. ခင္ဗ်ာ……
လာဒ်တိတ်နေသူများ ၊ ဈေးရောင်းမကောင်းသူများ ၊ အကြွေးမရသူများ ၊ အကြွေးမဆပ်နိုင်သူများ ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ ၊အကြီးအကဲနဲ့ အဆင်မပြေသူများ ၊ အလုပ်အကိုင် တို့လို တန်းလန်း ဖြစ်နေသူများ ၊ လာဒ်ရွှင်ငွေဝင်လိုသူများ အတွက်အလွန်တရာမှ လာဒ်ရွှင်စေသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီရွတ်သော ဂါထာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…
ကိုယ်တွေ့တစ်ခု ပြောပါရစေ… 2012.12.31 နေ့မှာ ငွေ ၆ သိန်း ပေးပါမယ် လို့ ကတိပြုခဲ့တာပါ.. 29.12.2012 နေ့မှာ လက်ထဲမှာ ငွေ ၄ သိန်းပဲ ရှိပါတယ်.. ၂ သိန်း လိုနေတယ်လေ.. ၂ သိန်းကို ၂ ရက် အတွင်းဘယ်လို ရှာရမလဲ.. စိတ်ပေါက်ပေါက် နဲ့ တီဗွီ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ အဲဒီမှာ ဗန်မော် ဆရာတော် ဒေါက်တာ ကုမာရ ဘိဝံသ က MRTV4မှာ ရသေ့ကြီးဦးခန္တီအကြောင်း တရားဟောနေတာ နာ လိုက်ရပြီး အဲဒီလာဒ်ရွင်စေတဲ့ ဂါထားကို အားတိုင်း ရွတ် မနက် ၄၅ မိနစ် ၊ ည ၄၅ မိနစ် ရွတ်လိုက်တာ 31.12.2012 နေ့လည် 2း00 နာရီမှာ–
ဟောခန်းမှာ ဗေဒင်ဟောနေရင် ဖုန်းဝင်လာတယ်..ကံစမ်းမဲပေါက်တယ်တဲ့ ၂ သိန်းရမှာတဲ့……ဟိုက်ရှားပါး…. လန်းသွားပါတယ်…..
ကတိ အတိုင်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်….ကိုယ်တွေ့ပါဗျာ..
အဲဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောပြတာ သူက ပြန်ပြောတယ်.. ငါလည်း အဲဒါ ရွတ်တာ ဒီမနက်ပဲ အိမ်ဝိုင်းရောင်းထွက် လို့ ဆိုပြီး ၂ သိန်း လာကန်တော့သွားတယ်တဲ့…. ..တော်တော်ထူးတဲ့ ဂါထားပါပဲဗျာ
ငွေကြေးအခက်ခဲ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေများ လည်း မနက် ၄၅ မိနစ် ည ၄၅ မိနစ် ရွတ်ကြည့်ပါလာဗျာ….ဘာ ခက်တာ မှတ်လို့ …
ဒေါက်တာ ကုမာရ ဘိဝံသ(ဗန်းမော်ဆရာတော်) ချီးမြှင့်တော်မူသော ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီ၏ဂါထာတော်။
အရဟံ၊ ဗဟိ-အန္တ-ဇယံ၊ သုဂတံ၊
(အနက်ကို ရွတ်ဆိုရန်မလိုပါ..အဓိပ္ပါယ် သိရန် ရေးပေးတာပါ…
အထက်ပါ ဂါထာကို သာရွတ်ပါ။)
၁။ အရဟံ – ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၂။ ဗဟိ-အန္တ-ဇယ – အတွင်း-အပ ရန်ကို အောင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၃။ သုဂတံ – ကောင်းသောစကားကို ဟောပြောတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၄။ အမိတံ – မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် တန်ခိုးဗျာဋိဟာရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၅။ ဝိရဇံ – ကိလေသာမြူ ကင်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၆။ လလိတံ – တင့်တယ် သပ္ပါယ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၇။ အတုလံ – အတုမရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၈။ စရဏံ – အကျင့်စရဏနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၉။ တိ-ဘဝူပ-သမံ – ဘုံသုံးပါး၌ ကိလေသာငြိမ်းအေးသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၀။ ယမကံ – ရေမီးအစုံအစုံ တန်ခိုးဗျာဋိဟာနှင့် ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၁။ သုခဒံ – ချမ်းသာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၂။ သရဏံ – ကိုးကွယ်အားထားရာဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
၁၃။ ဇိနံ – မာန်ငါးပါးကိုအောင်မြင်သော မြတ်စွာဘုရားကို ပဏာမာမိ-ရှိခိုးပါ၏။
လိုသလောက် မရပေမဲ့ လုပ်သလောက်တော့ ရပါတယ်…. ခင်ဗျာ……
မိမိရဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေနဲ့ လူသုံးယောက်အသက်ကိုကယ်ပြီး ဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့ ကလေးလေး